सुनवलका कोरोना संक्रमित पुरुषको बुटवलमा मृत्यु | Mechikali Daily
सुनवलका कोरोना संक्रमित पुरुषको बुटवलमा मृत्यु
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २८ आश्विन २०७७, बुधबार १२:५८
बुटवल । बुटवलमा थप एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषकोे मृत्यु भएको छ । नवलपरासीको सुनवल–४ का ७७ वर्षीय पुरुषको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुमा उपचारको क्रममा गयराती २ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले पुष्टि गरे ।
गत आइतबार बुटवलको चौराहा अस्पतालमा ल्याईएका उनलाई सोमबार बिहान लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । त्यहाँं पिसिआर परिक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनलाई फिभर क्लिनिकमा उपचार गरिएको डा. गौतमले बताए । उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछी कोरोना बिशेष अस्पतालमा लगिएको थियो । ति पुरुषमा ज्वरो, स्वासप्रश्वासमा समस्या र रक्तअल्पताको समस्या थियो ।